Warbixin kooban oo ku saabsan xafladdii soo dhawaynta dowlada cusub ee somalia oo ay qabteen jaaliyadda somalida ee dalka Malaysia.
Xafladaas oo si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu soo dhawaynayey Dowladda u dhalatay ummadda Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay 14-10-04 magaalada Kuala Lumpur oo ah magaalo madaxda Malaysia. Kullankaas oo lagu tilmaamay isu imaatinkii ugu balaarnaa ee jaaliyadda soomalida ee dalka Malaysia ayaa waxaa soo abaabulay ururka Ardaydayda soomaliyeed ee wax ka barata Malaysia. Kullankaas ayey Jaaliyaddu ku muujisay taageerada iyo dareenkooda ku wajahan dawladda cusub ee Soomaaliya, waxaana munaasabadaas hadallo qiiro iyo wadaninimo xambaarsan ka soo jeediyey tiro badan oo ka mid ahaa ardaydii iyo aqoonyahanadii ka soo qaybgalay munaasabadaas.
Kullanka waxaa xiririnayey Mudane Cabdirashiid Guureeye waxaana ugu horayn lagu furay aayadaha Qur'aanka Kariimka ah iyo wacdi diini ah oo ku aadanaa bilashada bisha barakaysan ee Ramadaan kaas oo ay halkaas kasoo jeediyeen Culimado Soomaaliyeed oo booqasho ku soo gaaray Malaysia.
Dadkii halkaa ka soo jeediyey hadalada qiirada leh ee isugu jiray guubaabo iyo waano ku jeeda dadka iyo dowladda Soomaaliyeed waxaa ka mid ahaa Dr. Cabdulcasiis xaaji Diriye, Cali Cadbirashiid Cali sharmaarrke, Sheekh Maxamuud Sh. Cabdul-Baari, Cali Cabdullahi Warsame, Dr. Xirsi labagare, Cumar Cigge, Xasan Sheekh Cali, Maxamuud C/raxmaan, Ibraahim sheikh Cabdulqaadir Shidane, Maxamed Cumar, cabdullahi Caaqil yare, iyo Cabdirisaaq Cumar Maxamuud.
Ugu danbayn waxaa ay jaaliyaddu u rajaysay dowladda cusub iyo hogaankeedaba guul dadka soomaliyeed meel ay joogaanbana in ilaahay uu fahamsiiyo ahmiyadda ay nabaddu iyo garanimaddu leedahay.
Waxaa xusuus mudan in dalka Malaysia ay ku noolyihiin jaaliyad soomaliyeed oo u badan arday wax ka barata jaamacadaha iyo macahida sare ee dalka, waxaana guud ahaan lagu qiyaasaa tirada jaaliyada ilaa iyo 400 oo qof.
Malaysia waxay ka mid tahay wadamada ay waayan danbe sida aadka ah ay ugu soo badanayaan ardayda soomaliyeed ee doonaya waxbarashada sare kuwaas oo badankoodu ay takhasusyo kala duwan ay ka diyaariyan jaamacadaha dalka ha noqoto heerka kowaad (under graduate) amaba heerka labaad iyo sedexaad(Masters and Ph.d)
Dr. ali Abdullahi Warsame Kuala Lumpur,